OneSignal: Wedzera Push Notifications neDesktop, App, kana Email | Martech Zone
China, Gumiguru 25, 2018 China, Gumiguru 25, 2018 Douglas Karr
Mwedzi wega wega, ini ndaizowana zviuru nezviuru zvevashanyi vanodzoka kuburikidza nebrowser push notices dzatinobatanidza. Nehurombo, chikuva chatakasarudza chave kuvhara saka ndaifanira kutsvaga chitsva. Zvakatoipisisa, hapana nzira yekuunza avo vekare kunyoresa kudzokera kunzvimbo yedu kuitira kuti titore hit. Nechikonzero ichocho, ini ndaifanira kusarudza chikuva chinozivikanwa uye chinotyisa. Uye ndakazviwana mu OneSignal.
Kwete chete OneSignal do Push notices for browsers, naivowo chitoro chimwe-chekumira chekupushira zviziviso kuburikidza nemaapplication efoni kana neemail zvakare.
Chii chinonzi Push Notification?
Zvizhinji zvekushambadzira kwedhijitari zvinoshandisa pull matekinoroji, ndiye mushandisi anoita chikumbiro uye sisitimu inopindura neshoko rakakumbirwa. Muenzaniso unogona kunge uri peji rekumhara apo mushandisi anokumbira kurodha pasi. Kamwe kana mushandisi akaendesa fomu, email inotumirwa kwavari ine chinongedzo kurodha pasi. Izvi zvinobatsira, asi zvinoda chiito chetarisiro. Push notices ndiyo mvumo-yakavakirwa nzira apo mushambadzi anowana kutanga chikumbiro.
Heino mienzaniso mishoma yekushambadzira notices:
Desktop Push Notifications - mabhurawuza azvino anopa mukana ku kusunda ziviso. Panzvimbo ino saiti, semuenzaniso, mushanyi-wekutanga-nguva anobvunzwa kana tichigona kuvatumira push ziviso. Kana ivo vakabvuma, saka nguva yega yega patinotsikisa posvo nyowani ivo vanogashira desktop ziviso.
Mobile Kunyorera Push Notifications - nharembozha dzinogona kuzivisa vashandisi venhare kuburikidza nekumanikidza ziviso. Imwe nhare mbozha yandinofarira kushandisa ndeye Waze, nekuti inoverenga karenda yangu uye inondizivisa - zvichibva netraffic - pandinofanira kuenda kuti ndisvike kumusangano wangu unotevera nenguva.
Yakakonzera Email Push Notifications - kana iwe ukahodha kubva kuApple, iwe unowana Push email ziviso izvo zvinokuzivisa iwe kana yako odha yakaiswa mukati uye kana iri munzira kuenda kwairi kuenda.
OneSignal inopa mamwe anoshamisa maficha parutivi kubva pamuchinjikwa-chikuva sarudzo uye nehasha mitengo:
15 Minute Setup - vatengi zvipupuriro vanoti havagone kutenda kuti zvaive nyore sei kutanga.
Yechokwadi-Nguva Yekutevera - Tarisa kushandurwa kwezaziso dzako uye maemail munguva chaiyo.
Zvigoneka - Mamirioni evashandisi? Tave navo zvose akafukidzwa. Isu tinotsigira akawanda mahedhiyo uye ese makuru ma SDKs.
A / B Bvunzo Meseji - Endesa mameseji maviri ebvunzo kune subset yevashandisi, wobva watumira iri nani kune vamwe vese.
Segmentation Targeting - Gadzira zviziviso zvakasarudzika uye maemail, uye uzviendese kumushandisi wega wega panguva yakakodzera yezuva.
Otomatiki Dhirivhari - Set it ndokukanganwa. Tumira zvawo ziviso kune vashandisi.
Pamusoro peiyo API yakasimba, WordPress plugin, uye software yekuvandudza kits (SDKs) kuti ibatanidze nyore, OneSignal inopa yakakura mushandisi interface kune vatengesi kuti vatumire yavo yavo yekuzivisa notifisi zvakare. Ivo zvakare vanopa kunze kwebhokisi kusanganiswa ne SquareSpace, Joomla, Blogger, Drupal, Weebly, Wix, Magento, uye Shopify.
Saina Saina Mahara paOneSignal
Tags: ab test Push noticesBloggerbrowser zivisomuchinjika-chikuva kusunda noticesdesktop zivisodrupalJoomlaMagentonharembozha app zivisoziviso nzvimbovakaenzanaPush apiPush zivisoPush ziviso apiPush ziviso pluginchaiyo-nguva Push yekuteverasafari zivisoscalable Push noticeschidimbu kusunda Noticesshopifysquarespaceyakatanga emailziviso yewebhuweeblywixWordpress plugin